ယာဉ်တိုက်မှုနောက်ဆက်တွဲ စာနာမှု နှင့် တာဝန်သိစိတ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ယာဉ်တိုက်မှုနောက်ဆက်တွဲ စာနာမှု နှင့် တာဝန်သိစိတ်
ယာဉ်တိုက်မှုနောက်ဆက်တွဲ စာနာမှု နှင့် တာဝန်သိစိတ်
Posted by amatmin on May 18, 2012 in Creative Writing, Critic | 19 comments
ယာဉ်တိုက်ခံရသူဟု ဆိုလိုက်သည်နှင့် သေမည်ရှင်မည်.မဆိုနိုင်သေးပဲ.
သေလုမျောပါး ဟုဆိုအပ်သောရောဂါကို ခံစားနေရမှန်းလူတိုင်းလိုလိုသိနိုင်မည်ကားငြင်းမရ..။
ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်သည်ဟူသော အသံကိုကြားလိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက်.စုတ်တသတ်သတ်နှင့်
သနားကရုဏာကို ဖော်ပြဖို့ရန် ၀န်မလေးတတ်ပေမဲ့
ကူညီလိုခြင်းကင်းမဲ့ခြင်းများကြောင့် မသေသင့်ဘဲ သေရသူမှာလည်း ဒုနှင့်ဒေး..။
ကျနော်ယမန်နေ့ညဦးပိုင်းက မြင်ခဲ့ရသော ဖြစ်ရပ်တခုကား လက်တွေ့ကျကျ……။
အချိန်မှာကား ၁၇.၅.၂၀၁၂ ညဦးပိုင်း ၇ နာရီ ၃၀ နီးပါးခန့်….
ဆူးလေမှတဆင့်အိမ်အပြန် ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမကြီးပေါ် ကုက္ကိုင်းမီးပ္ပိုင့် မရောက်မှီ ကိုက် ၁၀၀ ခန့်.အလိုတွင်.
အသက်ကြီးကြီးလူတယောက်လဲနေပြီး အပေါ်မှလူတယောက်က ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းဖြင့် ကုသပေးနေကာ.
ပါးစပ်မှလည်း လူနာတင်ရန် ကားတစီးလောက်တားပေးကြပါဟု အော်ဟစ်နေ၏..။
ဘေးဘယ်ညာလမ်းတဘက်စီမှ ကားသစ်ကားဟောင်း .လူပေါင်းစုံစွာ ဥပဒေဟိုသွားနေသော်လည်း
အခင်းဖြစ်ရပ်ဘေးနားတွင်ကား ထိခိုက်သူ လူနာနှင့် ပြုစုသူမှလွဲကာ ကျန်သူမရှိ..။
နောက်ထပ် မြင်ကွင်းတရပ်သည်ကား အဆိုပါ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ရပ်နှင့် ကိုက်၁၀၀ ခန့်ဝေးသော
ကုက္ကိုင်းမီးပ္ပိုင့်ရဲကင်း အရှေ့တည့်တည့်တွင် လိုက်အေ့စ်တစင်းနှင့် ဆလွန်းကားတစီး အပါအ၀င် ကား ၄စီးခန့်ရပ်ထားပီး
ရဲကင်းမှ လူတချို့သည် ထိုဖြစ်ရပ်မြင်ကွင်းကို လှမ်းမျှော်ကြည့်နေကြ၏…။
ထိုဖြစ်ရပ်အလုံးစုံကို ကျနော်သည်လည်းအငှားကားပေါ်မှ မြင်ခဲ့ပြီး ယာဉ်ပေါ်မှ ဆင်းကာကူညီခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့သလို..
ကားပေါ်ပါဘေးဘယ်ညာမှ အခြားလူများနှင့်ပုံစံတူစုတ်သပ်ခြင်းနှင့် ရပ်မပေးသောကားများကို
အပြစ်ပြောခြင်းကိုကား ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ပြုမိခဲ့သည် ။
သို့သော် အဆိုပါဖြစ်ရပ်ကို မြင်ပြီးနောက် ပြန်လှန်တွေးတောမိသည်ကား..
မှန်ကန်မျှတခြင်းထက်..ပိုမိုအရေးကြီးသော လူသားဆန်သောစာနာမှုတရား ဖြစ်ပြီး..
ထိုအရာမှာ ကျနော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုက်အ၀န်းကြီးတခုလုံးတွင်ပျောက်ဆုံးနေ၏.။
ဆက်စပ်သတင်းအနေနဲ့ eleven media မှာပါတဲ့ ၁၅ ရက်နေ့ ည ၂ နာ၇ီ ခွဲလောက်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့..
အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်က ယာဉ်တိုက်မှု သတင်းကိုလည်း နဲနဲညွှန်းလိုက်ပါ့မယ် နော်..
”ကျွန်တော်တို့ မိတ္ထီလာလမ်းဆုံက မိုင်တိုင် ၂၈၅ ဆိုတော့ ကားတိုက်တဲ့ နေရာနဲ့ ၂၇ မိုင်ဝေးတယ်။ လမ်းဆုံကနေ မြို့ပေါ်ကို ၇ မိုင်ဆိုတော့ အကုန်လုံး ၃၄ မိုင်လောက်ပဲ ဝေးတယ်။ ဒီ ၃၄ မိုင်က ပုံမှန်မောင်းတာတောင် လေးဆယ့် ငါးမိနစ်လောက်ပဲ ကြာသင့်တယ်။ အခုတော့ မိတ္ထီလာဆေးရုံကို မနက် ခုနစ်နာရီခွဲမှ ရောက်လာတာဆိုတော့ ကြာလွန်းတယ် ထင်တယ်။ အမြန်လမ်းပေါ်မှာ တစ်ခုခုဖြစ်ရင် ကူညီမယ့်လူမရှိတာ အချိန်ကြာလွန်းတဲ့အတွက် မသေသင့်ပဲ သေရတာများနေတော့ သက်ဆိုင်ရာအနေနဲ့ တစ်ခုခုတော့ စီစဉ်ပေးသင့်တယ်”ဟု ကိုယ်တိုင် သွားရောက်လေ့လာခဲ့သူက ဆိုသည်။
“ မြန်မာလူမျိုးများသည် သူတဖက်သားကို ကူညီဖို့ရန် ၀န်မလေးတတ် ”..။
ဆိုတော့ ထိုစကားရပ် ပြန်လည်အသက်ဝင်ဖို့ ကျနော်တို့ ခင်ဗျားတို့တွေမှာ တာဝန်ကိုယ်စီရှိကြ သည်ထင်ပဗျာ..…
စကားမစပ်..ရွာမိတ်ဆွေတွေရေ..ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ကိုလွန်သွားမှ သတိရမိတာကြောင့် မရလိုက်တာကို ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ..
ဘေးနားမှာတော့ ရွာ့မိတ်ဆွေ တဦးပါလာပေမဲ့ နှစ်ယောက်လုံးမှင်သက်နေတာကြောင့် မေ့ခဲ့ပါတယ်.
ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ရင်တော့ ယာဉ်မောင်းမှာ တာဝန်ရှိတာအမှန်ပါ သိုပေသည့် အခိုင်တို့ရုံးရှေ့မှာ ယမန်နေ့က အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုပြောချင်ပါတယ် ရုံးရှေ့ဂိတ်မှာ ကားတွေဝင်ရန် တန်းစီနေတာကို စက်ဘီးမောင်းသူက အတင်းကိုဖြတ်ဝင်ပြီးနင်းပါတယ် အခိုင်တို့ရုံးကားနဲ့ တိုက်မလိုဖြစ်ပြီးလွတ်သွားတယ် နောက်တစ်ခါ ကွန်တိန်နာတင်တဲ့ကားနဲ့ထပ်တိုက်မိသလိုဖြစ်ပြန်တယ် အဲဒီစက်ဘီးသမားက သိသိကြီးနဲ့မဆင်မခြင်မောင်းတာပါ ဒါမျိုးဆို တိုက်မိရင် သူလည်းဒဏ်ရာရမယ် ကားသမားတွေလည်းဒုက္ခရောက်မယ် ဒေါသကြောင့်ကားပေါ်ကနေ လှမ်းအော်မိပေမယ့် ဒဏ်ရာရရင်တော့ သနားစရာတော့ကောင်းပါတယ် …… ဘာဖြစ်ဖြစ် အားလုံးဆင်ခြင်နိုင်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ ……..
ကျနော်လဲ မနေ့ က ညနေက လိုက်ထရပ် နှစ်စီး တိုက်တာတွေ့ တယ်ဗျား
ကားတစ်စီး သူ့ ဘာသာတစ်စီးထဲမောင်းနေရင် အရှေ့ဘန်ဘာတွေ ပြုတ်ကျပြီး လမ်းဘေးထိုးရပ်လိုက်ရတယ်.
လူထုကြား တော်တော်ပြန့်အောင် ပြောရမဲ့ ကိစ္စပါ
အရင်ဆုံး အသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေကို ဆေးကုသနိုင်ဘို့ စီစဉ်ပေးရမယ် ဆိုတဲ့ စာနာတဲ့ စိတ်လေးရယ် ၊ အဲဒီလို ၀င်ကူညီလဲ ဥပဒေကြောင်းအရ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး ( ကိုယ့်ကို အမှုမပါတ်ပါဘူး )ဆိုတဲ့ ဗဟုသုတ ရယ်
လူတွေ များများသိအောင် လုပ်ပေးရမယ်
အဲဒါတွေမှ မလုပ်ပေးနိုင်ဘူး ဆိုလဲ ဘေးကနေ ရပ်ကြည့် စုတ်သပ်နေမဲ့အစား ယာဉ်ထိန်းရဲတွေက စီစဉ်ထားတဲ့ လူနာတင်ယာဉ် ကိုခေါ်ဘို့ ၅၀၀၀၀၅ ( ငါးသိန်းငါး )ကို သာ အမြန်ဆုံး ဖုန်းဆက်ပေးကြပါ
ကိုယ်နဲ့ မဆိုင် သလို နေတတ်တဲ့ အစွန်းကိုလည်း မရောက်ကြပါနဲ့
နောက်ထပ် အစွန်းတခုဖြစ်တဲ့ ..
မှန်လား မှားလားမသိ…တိုက်ပီဟေ့ ဆိုတာနဲ့ ကားသမားကို
ဆိုင်ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင် ဆွမ်းကြီး ၀ိုင်းလောင်းတတ်ကြတဲ့
အစွန်း ကိုလည်း မရောက် စေချင်ပါကြောင်း..
ကိုမက်ရေ ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ယဉ်တိုက်မှုမြင်ကွင်းလေးဟာဖြင့် အလွန်စိတ်ထိခိုက်ကြေကွဲဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်ဗျာ……… ကျွန်တော် ကိုမက်နဲ့လမ်းခွဲပီး အိမ်ရောက်ချိန်တိုင်အောင်ပင် ထိုအကြောင်းလေးကို စဉ်းစားနေမိတယ်ဗျာ….. အဲဒီယဉ်တိုက်မှုဖြစ်စဉ်အနီးနားမှာ (………..)အထူးကုဆေးရုံကားလေးတစ်စီးဖြတ်မောင်းသွားပါတယ်….. ဒါတောင် လစ်လျူရှုသွားရက်လေသူများကိုလဲ ကြိတ်မနိုင်ခဲမရ ဒေါသဖြစ်မိပါတယ်…… လူ့အသက်တစ်ချောင်း ကယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာ………
ဟုတ်တယ် ကိုအမတ်မင်းရေ. တော်တော် စိတ်ပျက်စရာကောင်းနေတယ်ဗျာ။
ပြုပြင်ဖို့ အားပေးနိုးဆော် တိုက်တွန်းပြီး ကူညီလိုစိတ်ကလေး အသက်သွင်းပေး
လူတိုင်းမှာ စာနစိတ်တွေ မရှိတော့ဘူး
ဘယ်သူ့အပေါ်ဘယ်လို အမြတ်ထုတ်မလဲ ဘယ်လိုယုတ်လိုက်မလဲ
အော် လု လူ လူး
ကိုအမတ်မင်း ရေ အချို့ ကားသမားတွေအနေနဲ့ ၊ ဆီဂိတ်ပြတာမမှန်ရင်လဲ ၊ အမြန်လမ်းမပေါ်မှာ ဆီပြတ်တဲ့ ပြဿနာ ကို ကြုံကြရတယ်ခင်ဗျ ။ လူပြတ်တဲ့ နေရာမျိုးမှာဆိုရင်တော့ ၊ ဆီသွားဝယ်ပေးမယ့် မေခလာ ကို မျှော်ပေရော့ဘဲ ။
ဒီလိုမြင်ကွင်းတွေကို မမြင်ရအောင် ယာဉ်မောင်းသူတွေအားလုံး သတိ၊ အသိ ထားပြီးပုံမှန်စီးမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုစိတ်မကောင်းစရာ မြင်ကွင်း၊ သတင်းတွေကို မြင်ရ ကြားရမှာမဟုတ်ဘူးလေ
ယာဉ်တိုက်မှု့ဖြစ်ပြီဆိုရင် ဘာကြောင့်တိုက်တိုက် ဘယ်သူမှားမှား ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရသူကို အဆောတလျှင် ကူညီသင့်ပါတယ်။ အခုကတော့ ခင်ဗျားတို့ ဆေးရုံအမြန်ပို့လဲ ဆေးရုံမှာ ရဲမှတ်ချက်မရမချင်း ……………..။
ပလက်ဖေါင်းပေါ်ကိုတက်တိုက်ရင် လူကူးမျဉ်းကျားမှာ၊ မီးပွိုင့်မှာအတိုက်ခံရရင် ယာဉ်မောင်းသူအမှား
ကားလမ်းပေါ်မှာတိုက်မိရင်တော့ အဲဒါ အတိုက်ခံရသူအမှားပဲ..။
ကားလမ်းပေါ်မှာ ယဉ်တိုက်မှု့ဖြစ်ရင် အတိုက်ခံရသူသို့မဟုတ် သူသေရင်ကျန်ရစ်တဲ့မိသားစုက တိုက်တဲ့ယာဉ်မောင်းကို နစ်နာကြေးပြန်ရော်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ တကယ်တရားမျှတတဲ့ ဥပဒေမျိုးပေါ်ပေါက်စေချင်လိုက်တာ…။
@ မခိုင် နှင့် ကိုပေါက်ဖော်..
ကျနော့လိုပဲ ခင်ဗျားတို့လည်း အဲ့လို ပြသာနာတွေ မြင်မိတယ် ဆိုမှတော့
နောက်ဆက်တွဲမဖြစ်အောင်လို့ ကိုယ်စီလူတိုင်း (ယာဉ်မောင်း ၊ လမ်းသွားသူ)ကိုယ့်စည်းကမ်းကို
ထိန်းကြတာ အကောင်းဆုံးပါပဲဗျာ..ကိုယ့်တာဝန်ကို ကိုယ်ကျေထားတော့ နောက်ဆက်တွဲ ကင်းတာပေါ့ နော်..
ဆြာတို့ ပြောသလိုပါပဲ ဗျာ..အစွန်းထိတွေးကြောက်နေကြတာ အဆိုးဆုံးပဲ ..ကိုယ်တောင်ပါတတ်သေး
ကျနော်တော့ မော်တော်ပီကယ်ရဲကင်းရှေ့မှာ ရပ်ထားတဲ့ (သူတို့နဲ့ ပက်သက်တဲ့ကားတွေထင်ပ)
ကားတွေနားကနေ ဖြစ်ရပ်ကို လှမ်းကြည့်နေကြတာကို မြင်မှ ပိုရင်နာသဗျာ..
ကိုဂီ့စကား ငှားပြောရရင် ကျုပ်တို့ လိုသေးရဲ့ဗျာ..
ကျနော် တို့ဆီမှာ စာနာမှုတွေ တကယ်ခေါင်းပါးကုန်နေတာလို့ ထင်တာပဲဗျာ..
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွနုပ်တို့မှာလည်း တာဝန်ရှိသည်ပေါ့ နော်.
ပြင်ရမဲ့ စိတ်ထားတွေ ထဲမှာ အရေးကြီးဆုံး တစ်ခု ကို ထောက်ပြပေးလို့ ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစွာ အားပေးသွားပါတယ်။ :-)
ကားတိုက်မှု ကို ဟန်ပြပြီး ကလိမ်ကကျစ်စိတ် နဲ့ စေတနာနဲ့ လာကူညီသူ ကို လဲ မစော်ကားဖို့ ပညာပေးသင့်တယ်။
တကယ် ဒုက္ခဖြစ်သူတွေကို ကူညီရင် အမှုမပါတ်နိုင်ကြောင်း ကိုလဲ အသိပေးသင့်တယ်။
သက်ဆိုင်ရာ ဌာနက လူတွေ တာဝန် ကိုသိသင့်၊ ကျေသင့်တယ်။
အလုပ်လုပ်တာ ကို စေတနာလေးပါထား လုပ်သင့်တယ်။
“ မြန်မာလူမျိုးများသည် သူတဖက်သားကို ကူညီဖို့ရန် ၀န်မလေးတတ် ”..။ဆိုပေမဲ့..
အများအားဖြင့်..ကူညီလို့ ဒုက္ခရောက်တဲ့ သာတကတွေရှိနေတော့….
ွှဲအဲဒီအမတ်မင်းကို လွှတ်တော်ထဲ ရောက်အောင် ၀ိုင်းဝန်းမဲပေးကြဖို့လိုတယ်။
တနည်းပြောရရင် လွှတ်တော်ထဲက အမတ်တွေ တို့ရွာထဲက အမတ်မင်းဆီမှာ လူထုအကျိုးပြုလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ချင်စိတ်မွေးမြူရေးသင်တန်း လာတက်သင့်တယ်။
အခုလို တာဝန်သိစိတ်တွေ.စာနာမှုတရားတွေ နည်းပါးလာပြီး..
လူ့အသက်တွေ မသေသင့်ဘဲ သေနေကြရတာတွေ အတွက်..
လိုအပ်တဲ့ ဆောင်ရွက်မှုလေးတွေ လုပ်ပေးနိုင်ကြရင်တော့..
နောက်လိုက်လူထုအနေ နဲ့တော့ အန္တရာယ်ကင်းကင်း စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ ..
ကိုယ်စီ.တာဝန်သိမှုလေးတွေကို ၀ိုင်းဝန်းနိုင်ကြမယ်ထင်ပ ဗျာ..
မှတ်မှတ်ရရ ရှစ်ချောင်းမြောက်လက်မက ကိုယ့်လက်မပါပဲ။
မယုံ ရင် သူကြီးကိုသာ မေးကြည့်ပေတော့ဗျာ။
ကိုမတ် ရေ .. ခုတလော ကျွန်တော် လဲ အလွန် အလုပ်ရှုပ်နေတာနဲ့ စာများတဲ့ ပိုစ့် ဆို မဖတ်ပဲ ကျော်ကျော် သွားမိတယ်ဗျာ။ photography Categories လေးတော့ လာလာကြည့်မိတာ ၀န်ခံပါရစေ။ ခုမှမြင်လို့ မန့်ပြီဗျို့ ။ ကျွန်တော် တို့ လူမျိုး တွေက ကူညီတတ်ပါတယ်။ မန်းလေး အမရပူရ ဘက် သွားကြည့်ပါ။ အဆင်ပြေတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း ၀င်လျှောက် … ညအိပ်ပြီး မနက်စာ ပါစားလို့ရပါတယ်..။ကိုယ်တွေ့ပါ။ ကျွန်တော့ စိတ်ထင် (ကျွန်တော့ တစ်ယောက်ထည်းရဲ့ အမြင်) လူတွေက စားဝတ်နေရေးအတွက် ကအချိန် ပေးရလေတော့ … ဆေးရုံ လိုက်ပို့ ပြီးရင် .. .နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့ .. သက်သေ မို့ ခဏ နေပါဦး တို့ .. ဘာတို့ တွေနဲ့ ဇာတ်လမ်း ရှည်မှာ စိုးကြတယ် ထင်ပါတယ်ဗျာ။ မန်းလေး ကျောင်းနားမှာ ဆိုင်ကယ် မှောက်တာကို သွားကူညီ ပေးဖို့ အနားမှာ ဆိုင်ကယ် ရပ်ရင်း ဘာဖြစ်လဲသွားမေးတဲ့ ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်း … ရမန်ကြီး တစ်ပတ် သံမန်တလင်း ပေါ် အိပ်ခဲ့ရပါကြောင်း …..။ ကူညီတတ် .. ကူညီချင် တဲ့ကိုမတ် ရဲ့ စေတနာ ကိုတော့ လေးစားပါတယ် ဗျာ။ (စိတ်ရင်းနဲ့ ပြောတာပါ။) ဒါပေမယ့် တစ်ချို့  လူတွေက အဲ့ဒီ့ စေတနာ နဲ့ မတန်ဘူးဗျ ….။
ဒီပိုစ့်က ထပ်တက်လာပြန်တော့ ထပ်ပြောချင်ပြန်သေး…
(ဒီလျှာရှည်တဲ့အဖိုးကြီးက အဆဲမခံရမချင်းအရှိန်မသေဘူး… )
ကျုပ်အထင် ၂၀၀၂ ၀န်းကျင်ကဖြစ်မယ်
ကျုပ်မိတ်ဆွေရဲ့ တောင်းအေ့စ်ပစ်ကပ်ကလေးက ကားတိုက်ခံရတဲ့သူကို တင်ပြီး ဆေးရုံကြီး အရေးပေါ်ကို ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။
လူနာက မသေပါဘူး သွေးတွေတော့ ထွက်နေတယ်
အဲဒါ ဆေးရုံရောက်တော့ ဘယ်ကားနဲ့တိုက်တာလဲ ဘယ်သူလိုက်ပို့တာလဲ စသည်ဖြင့်မေးပြီး
လိုက်ပို့တဲ့ ကားကို အပြင်လိုက်ကြည့်တော့
“ ကားတိုက်ခံရသူသည် အရေးပေါ်အကူအညီရလိုပါက သွေးမထွက်အောင် အောင့်ထားပါရန်…. ”